कार्लोस रुइज Zafón: पत्रहरु मार्फत आत्माको दृढता वर्तमान साहित्य
कार्लोस रुइज Zafón: पुस्तकहरू
कार्लोस रुइज Zafon।
कार्लोस रुइज जाफान २१ औं शताब्दीका समकालीन लेखकहरू मध्ये एक थिए। उनी सर्भेन्टेस पछि मात्र विश्वको सबैभन्दा व्यापक रूपमा पढ्ने उपन्यासकार मानिन्छन्; यो सबै भन्दा उत्कृष्ट कामका लागि धन्यवाद: हावाको छाया (२००१) यस उपन्यासले लेखकको क्यारियर समेट्यो र आलोचकहरूले यसप्रकार वर्णन गरे: "… हालसालैका महान् साहित्यिक अभिव्यक्तिहरू मध्ये एक"।
उपन्यासकारको आफ्नै शैली थियो, जसमा उनले विभिन्न साहित्यिक विधाहरू सँगै ल्याए। उसले आफ्नो सिर्जनामा ​​बनायो एक शानदार सार प्रत्येक कथानक en केहि अनौंठो र अतुलनीय। आफ्नो क्यारियर भर मा आफ्नो कामहरु को साथ यो दर्जनौं भाषाहरु मा अनुवाद गरिएको थियो २ million मिलियन भन्दा बढी पाठकहरूलाई जित्न सफल भयो, जो निरन्तर उसको असाधारण कथाहरूको प्रतीक्षा गर्थ्यो।
1 जीवनी डाटा
1.1 पहिलो अध्ययन र साहित्यिक चरणहरू
1.2 विश्वविद्यालय अध्ययन र व्यावसायिक अनुभव
2 साहित्यिक दौड
2.1 प्रारम्भिक मृत्यु
2.2 कार्लोस रुइज Zafón का उपन्यास
3 कार्लोस रुइज Zafón द्वारा केहि पुस्तकहरु
3.1 धुंधको राजकुमार (१ 1993 XNUMX))
3.2 मरिना (१ 1999 XNUMX))
3.3 हावाको छाया (२००१)
शुक्रवार सेप्टेम्बर २ 25, १ 1964 .XNUMX, बार्सिलोना शहरले कार्लोस रुइज जाफिनको जन्म देखी। उसको परिवार समूह उनको बुबा जस्टो रुइज भिगो, एक बीमा एजेन्ट बाट बनेको थियो; उनको आमा, Fina Zafón, र आफ्नो जेठो भाई, जेभियर। उहाँ बाल्यकाल देखि, एक लेखक र एक महान कल्पना को रूप मा एक व्यवसाय देखायो। यसको प्रमाण उनले आफ्नो बचपनमा लेखेका तीन पृष्ठ कथाहरू थिए, जसमा आतंक र मार्टियनहरू थिए।
पहिलो अध्ययन र साहित्यिक चरणहरू
उनले जेसुइट कलेज: सान इग्नासियो डे सारिअ, प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरे जुन गोथिक शैलीका लागि उनको सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्दछ। १ 15 वर्षको उमेरमा, उनले 600०० पृष्ठे उपन्यास पूरा गरे भिक्टोरियन रहस्यमा आधारित: Harlequin भूलभुलैया. यो पाठ विभिन्न प्रकाशकहरूलाई पठाइएको थियो, तर यो प्रकाशित भएको थिएन। त्यो अनुभवबाट उनले एडहासका सम्पादक फ्रान्सिस्को पोर्रियाबाट बहुमूल्य सल्लाह प्राप्त गरे।
विश्वविद्यालय अध्ययन र व्यावसायिक अनुभव
उनले सूचना विज्ञान अध्ययन गर्न बार्सिलोनाको स्वायत्त विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरे। अध्ययनको पहिलो वर्षको बखत उनले विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीहरूमा काम गर्न आवेदन दिए। ऊ भाडामा लिन सफल भयो दयाक्स, जहाँ उनी प्रतिलिपि लेखकमा योगदानकर्ताबाट उठेका थिए। पछि, अन्य महत्त्वपूर्ण एजेन्सीहरूसँग काम गरे, जस्तै: ओल्लिवी, टानडेम / DDB y म्याक क्यान वर्ल्ड ग्रुप.
1992 मा, रुइज Zafón विज्ञापन क्षेत्र बाट सेवानिवृत्त र आफूलाई साहित्य को लागी पूर्ण समर्पित गर्ने निर्णय गरे। A) हो लेख्न थाले एक रहस्य र कल्पना उपन्यास, जुन एक बर्ष पछि अन्त्य भयो: धुंध को राजकुमार. उनको प्रेमिकाको सिफारिसमा, उनले उनलाई प्रतियोगितामा प्रस्तुत गरे साहित्यको किशोर प्रकाशकबाट Edebé, जो जित्यो। पुरस्कारको साथसाथै उनले त्यो समयका लागि ठूलो रकम पनि पाए।
लेखकले इनामको पूंजी लगानी गर्ने निर्णय गरे आफ्नो अन्य जुनसाहरू, सिनेमामा पछ्याउँदै लस एन्जलस शहर सारियो। त्यहाँ बस्दा, लिपिहरू लेख्न सुरू भयो, आफ्नो उपन्यास को रचना त्यागेर। चाँडै पछि, उनले आफ्नो पहिलो कामको सिक्वेल प्रकाशित गरे: आधी रातको दरबार (1994) र सेप्टेम्बर को बत्तीहरू (उन्नीस पन्नास); क्रम पूरा गर्न कुहिर त्रयी
१ 1999 XNUMX। मा, उनले प्रस्तुत गरे मेरिनालेखकले उपन्यास वर्णन गरे: “… सबै भन्दा उसको व्यक्तिगत कार्यहरू"। एक बर्ष पछि, उनले वयस्क जनतामा शर्त लगाउने निर्णय गरे र टेट्रालोजी शुरू गरे बिर्सिएका पुस्तकहरूको चिहान, को प्रकाशन संग हावाको छाया (२००१) छिटो, काम भन्दा बढी १ sold लाख बेचे प्रतिलिपिहरूको, जसले स्पेनीको क्यारियर समेकित गर्दछ।
कार्लोस रुइज Zafon जुन १,, २०२० मा मृत्यु भयो लस एन्जलस (अमेरिका) मा, 55 XNUMX बर्षको उमेर मा र कोलोन क्यान्सर संग दुई बर्ष लडे पछि।
कार्लोस रुइज Zafón का उपन्यास
धुंध को राजकुमार (1993)
आधी रातको दरबार (1994)
सेप्टेम्बर को बत्तीहरू (1995)
कार्लोस रुइज Zafón द्वारा केहि पुस्तकहरु
१ 1943 .XNUMX को गर्मी मा, वाचमेकर म्याक्सिमिलियन कारभर le आफ्नी श्रीमतीलाई सूचित गर्दछ andrea उसका छोराहरू Licअलिसिया, इरिना र म्याक्स कि तिनीहरू सर्नेछन् एक इलाकामा एट्लान्टिकको किनारमा, तिनीहरूलाई युद्धबाट बचाउनको लागि। म्याक्स यस निर्णयसँग खुशी छैन, किनकि ऊ आफ्नो घर छोड्न चाहँदैन। जानुभन्दा अघिल्लो रात, उसको बुबाले उनलाई उनको जन्मदिनकोलागि चाँदीको घडी दिए पछि खुशी पार्ने प्रबन्ध मिलाए।
यात्राको क्रममा, म्याक्सिमिलियनले आफ्ना बच्चाहरूलाई घरको इतिहास बताउन थाल्छ, जुन अन्धकारको भूत हो। धेरै पहिले, पहिलेको मालिकको छोरा डुबाए र अनौंठो परिस्थितिमा मरे। लामो यात्रा पछि, Carvers आफ्नो नयाँ घर, एक रहस्यमय स्थान मा आइपुग्छ लामो र लामो समय प्रयोगको कारण धुलो; तुरून्त, तिनीहरू अनप्याक गर्न सुरु हुन्छ।
परिवारका सदस्यहरूले मिलेर सफा गर्ने कार्यमा मद्दत गर्छन् जसले उनीहरूलाई थाक्दछ। थोरै विश्राम पछि, अधिकतम, जो धेरै अन्तरदृष्टि र निडर छ, अनौंठो र डरावना तत्वहरू देख्न थाल्छ। त्यहाँबाट, यो जवान मानिस कालो क्षणहरू बाँच्नुहोस् जब भेट एक दुष्ट प्राणी संग: धुंध को राजकुमार, जसले शुभकामना दिन्छ, तर धेरै मूल्यमा।
धुंध को राजकुमार ...
अस्कर ड्राई बार्सिलोना फर्किन्छ धेरै वर्ष बितेका पीडित जीवन द्वारा पीडित, यो त्यहाँ छ जहाँ उसले आफ्नो कथा भन्न सुरु गर्ने निर्णय गर्दछ। यो सबै १ happened बर्षको उमेरमा भएको थियो र ऊ बोर्डि school स्कूलबाट भागेर शहरतिर जान लाग्यो। जिज्ञासाले उनलाई सारिअको पुरानो घरमा प्रवेश गर्न पुर्‍यायो, जहाँ उसले पुरानो पकेट वाच भेट्टायो, जुन ऊ हतारमा छोडेर जानुपर्‍यो।
ओस्कार, केहि नर्वस, वस्तु फिर्ता फर्कने निर्णय गर्दछ, तर मरीना द्वारा आश्चर्यचकित छ, जो उसलाई आफ्नो बुबा Ger withn संग। उसले घडी लिएकोले त्यस युवकको माफी माग्छ। कुराकानी पछि, केटाहरू बार्सिलोनाको सडकहरूमा हिंड्न भेला हुन्छन्, र यसरी एक अर्कालाई अझ राम्ररी चिन्न सकिन्छ। अर्को दिन, मरिना ओस्करलाई चिहानमा लग्छिन्, जहाँ उनले उसलाई खास चिहान देखाउँछन्.
चिहानमा कुँदिएको कालो पुतलीको साथ टमस्टोन छ, कुनै नाम छैन। आला हो एक रहस्यमय महिला द्वारा एक पटक एक महिना भ्रमण गर्नुभयो, जसले केवल रातो गुलाब छोड्दछ। उत्सुक, युवाहरूले यो विकराल अवस्थाको अनुसन्धान गर्छन्, जसले उनीहरूलाई पुरानो कृत्रिम कृत्रिम उद्योगमा पुर्‍याउँछ। त्यहाँ तिनीहरूले कारखाना मालिकको वरिपरि डरलाग्दो रहस्यहरू भेट्टाए: मिखाइल कोल्भेनिक।
डरलाग्दो यात्राले तिनीहरूलाई भयावह कथामा संलग्न गराउँछ, अत्यन्त खतरनाक र त्यसले सँधै तिनीहरूको गन्तव्य चिह्नित गर्दछ।
मरिना (पुस्तकालय कार्लोस ...
सशस्त्र संघर्षको अन्त्य पछि शान्त बार्सिलोनामा, युवा डेनियल सेम्प्रे आफ्नो बुबासँग मिलेर हिंडे तिर एक रहस्यमय ठाउँ। यो एक ले यो लिन्छ बिर्सिएका पुस्तकहरूको चिहानमा; त्यहाँ उसले प्रस्ताव राख्छ एउटा किताब छान्नुहोस्, जो यो खजाना हो भने ख्याल गर्नु पर्छ। अचम्मित, डेनियल कल गरिएको पाठ छनौट गर्दछन् हावाको छाया, जुलियन काराक्स द्वारा लेखिएको।
जब म घर पुग्छु, चाँडै पुस्तक पढ्नुहोस् र कहानी द्वारा हिज्जे होस्, त्यसैले उनले लेखकको बारेमा बढि जानकारी खोज्ने निर्णय गरे, तर कसैलाई सायद उसलाई थाँहा छैन। चाँडै, ऊ लान कुबर्टमा दौडिन्छ, एक रहस्यमय मानिस जसले कराक्सको सबै कार्यहरु नष्ट गर्न चाहन्छ। यो अनौठो प्राणीले डानियलको स्वामित्वको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सबै सम्भव गर्दछ।
अनुसन्धान जारी राखे पछि, डेनियल लेखकको चारैतिर ईन्ग्मासको पेसेरामा संलग्न छन्. त्यहाँबाट - विगत र वर्तमानका बीच - रहस्यमा संलग्न धेरै क्यारेक्टरहरू देखा पर्न थाल्छन्। मानौं तिनीहरू एको टुक्राहरू थिए पहेली, प्रत्येक कथा फिट हुन्छ पुरा तरिकाले माथि finalmente हलकर्ता सबै षडयन्त्र प्लट वरिपरि।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » कार्लोस रुइज Zafón: पुस्तकहरू
जे जे बेन्टेजको पुस्तकहरू